Iska Ilaali arimahan hadii xaaskaaga aad muddo ka maqneed - iftineducation.com
Iska Ilaali arimahan hadii xaaskaaga aad muddo ka maqneed
iftineducation.com – Marii hadi aad tahay qof in badan ka soo maqnaa xaskisa iyo caruuta aad dhashay waxaa laga rabaa in aad arimo badan iska ilaliso marka ugu horeysa ee aad u tago xaskada iyo caruurtada.
Waxaa jira waxyaabo badan kuwaas oo hadii aad sameyso laga yaabo in aad halkaas kuweyso farxad badan oo aad kala kulmi laheed xaaskada xalasha ah ee aad inbadan sugeysay.
Markaad timado gurigada waxaa laga rabaa in aad sameyso arimo ku qaas taas aad ku farxad galin karto xaaskada iyo caruurtda taas oo ay kamid yihiin in aad u keento hadyado fiican taas oo farxad galin karto xaaskada iyo caruurtada.
HOOS KA AQRISO SADDEXDA QODOB
1: Ha Sameyn in aad xaaskada ag marto markaad guri soo gasho waxaa laga rabaa in aad kow aad salanta ka bilowdo waliba salaan galgacal leh.
2: Ha isku dayin aad xaaskada habeenka kugu horeyay in aad weydisyo ciyaarta sariita taas badalkeda sameyn in aad u shekeyso waliba oga shekeyso sheeko ku saabsan sida aad ugu xiistay.
3: Ha isku dayin in aad xaaskada ka daahiso xaaskada taas badalkeed u samey in aad hadyada aad u keentay aad horay ka siiso xaaskada adig ku dhahaya qaali adiga kaliya ayaan kugu tala galay macn.
Gabdho soomaali ah oo ku faanay in ay jirkooda ka ganacsadaan Daawo muuqaalka